मोदीलाई नेपालमा किन गर्ने स्वागत ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यही वैशाख २८ गते नेपाल आउँदैछन् । उनलाई जनकपुर र काठमाडौँमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने भव्य तयारी भइरहेको खबर सञ्चार माध्यममा आएका छन् । उनको भ्रमणको तयारीका लागि भन्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू तथा गुप्तचरहरूले कैयौँ दिनदेखि नेपालमा दृष्य÷अदृष्य खालका चलखेल गरिरहेका छन् ।
के विवाहित छोरी माइतीगाउँमा बस्नु हुन्न ?
हाम्रो समाजमा छोरीलाई अर्काको घरमा जाने जातका रूपमा व्यवहार गरिने कुरा नयाँ होइन । छोरीलाई आफ्नो वंशको रूपमा समेत हेरिदैन । छोरीले आमाबुबाका निम्ति केही गर्नु हुँदैन, पाप लाग्छ† छोरी पराइघरमा जानु पर्छ† गएपछि जे जस्तो अप्ठयारो, दुःखसुख जे भए पनि माइतमा भन्न आउनु हुँदैन† माइत सुनाउन आउनु हुँदैनसम्म भनिने चलन पनि नयाँ होइन ।
सहिद मित्रमणि र सहिदको योगदान
– विमल पोखरेल
मित्रमणि आचार्यको हत्या भएको ३३ वर्ष पुगेको छ । आचार्य अनेरास्ववियु (छैठौँ) आठौँ केन्द्रीय समितिका केन्द्रीय सदस्य, रामपुर कृषि क्याम्पस चितवनका स्ववियु सभापति र पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका योद्धा थिए । मित्रमणि आचार्यको साङ्गठनिक कामकै सिलसिलामा चितवनको मेघौली गएको बेला पञ्च–काङ्ग्रेसी गुण्डाहरूले उनी बसेको घर घेरा हालेर साङ्घातिक आक्रमण गरी २०४२ वैशाख १८ गते हत्या गरेका थिए ।